Lahatsary Asongadina: Mpitolona, Fahafahana Maneho Hevitra, Olona ary Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2012 14:57 GMT
Ity fanadihadiana ity dia mikendry ny hampahafantatra ny hafatra faramparany ato amin'ny Global Voices izay mampiseho fomba maro fa manampy ny olona hilaza ny tantarany manerana izao tontolo izao ny Lahatsary. Afaka manaraka ny zava-miseho isaky ny faritra ianao ao amin'ny Fantsona YouTube-nay na manindry fotsiny ny rohy eo ambony.
Tao Yemen, nisy ny tantara mahatalanjona mikasika ny Diaben'ny Fiainana 264km manan-tantara, izay lava indrindra taorian'ilay Diaben'ny Sira (Salt March) 390 km tamin'ny andron'i Mahatma Gandhi ny taona 1930. Nandritra ny Diaben'ny Fiainana, nifamory ny ambanivohitra sy ny antanàn-dehibe mba hanome sakafo sy rano ho an'ireo vahoaka an'arivony nanao diabe nandritra ny efatra andro tsy an-kiato no sady mamakivaky tendrombohitra mba hanohitra ny tsy fahazoana mikitikitika ny filoha ankehitriny Saleh sy ny namany akaiky ary ny fianakaviany noho ny famonoana mpanao fihetsiketsehana tamin'ny fitroarana tao Yemen.
Araka ny nambaran'ity mpamam-bolongana @Afrahnasser, tao amin'ny Twitter:
Afrika Atsimon'i Sahara:
Ireo fianakaviana nidi-trosa nividianana trano ary nanjary tsy manan'asa intsony na fidiram-bola hiveloman'izy ireo no ampian'ny fikambanana manana tanjona hiaro ny fianakaviana tsy horoahina an-trano sy manome trano ipetrahana vonjimaika amina trano novidiana na babangoana raha toa ka tsy afa-manakana ny banky izy ireo. Mampiseho ny fahombiazan'izy ireo tsy hampiharana ny fandroahana lehilahy iray sy ny zanany lahy 13 taona ho eny an-dalambe ity lahatsary ity.
Nahatonga ny mpiserasera hamaham-bolongana sy hisioka Twitter momba ny doroala ny afo nahazo ny iray amin'ireo toeram-pizahan-tany mahasintona olona indrindra ao Shily, dia ny Vala-javaboarim-pirenena Torres del Paine , na izany fitantarana avy amin'ireo niserana tao amin'ny Valan-javaboary nandritra ny fotoana namindrana ny olona sy voarakitra an-dahatsary na avy amin'ireo olona manara-baovao sy miandry ny vaovao farany.
Manamora ny fivezivezen'ny olona miainga amina toerana iray mankamin'ny toerana iray hafa ny fitaterana iombonana ka tsy voatery ampiasa ny fiarany manokana intsony, saingy lasa fampijaliana indray no azo fa tsy fahafinaretana raha hipoka olona loatra izany fiara fitaterana iombonana izany. Ity hira salsa ity no ahitana ny mahazo ny olona ao anatiny rehefa mandeha amin'ny Transmilenio ny ao an-drenivohitra Bogota.